shaqooyin iyo xirfado soo saarta | khayraadka Work ka USAHello | USAHello
Baro warshadaha wax soo saarka iyo kala duwan ee noocyada kala duwan ee shaqooyinka wax soo saarka. Read ku saabsan waddooyinka mustaqbalkiisa kala duwan oo aad qaadi karto in wax soo saarka. Ogow waxa tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilowdo shaqo raadintaada.
Warshadaha ka dhigan tahay wax. About 18% shaqooyin in USA ay yihiin shaqooyin soo saarta. Dadka ka shaqeeya warshadaha daawada dhigi, baabuur, technology, ama cunto. dharka, macdanta, iyo warshadaha daabaco sidoo kale jira noocyo kala of saarka. Shaqooyinka intooda badan waa wax soo saarka ee warshadaha waaweyn ama ku daqiijin jireen, halkaas oo shaqaale ugu shaqeeyaan mishiinada waaweyn. Laakiin shaqooyin badan oo kale oo ku jira workshops yar.
Taas oo shaqada warshadaha?
Warshadaha waa warshadaha xiiso leh! Waxaa had iyo jeer la beddelo iyo hagaajinta. Sababtoo ah ee technology cusub, shaqo si deg deg ah ay isbedeli karaan. Haddii aad shaqo adag, waxaa jira wax badan oo ka mid ah siyaabaha aad uga lulmado karaa. Waxaad had iyo jeer uma baahna waayo-aragnimo shaqo ah ee wax soo saarka aad u hesho. Shirkado badan oo wax soo saarka ugu weyn ee ay bixiyaan on shaqo-ku-tababarka. Waxay ku bari doonaa xirfado aad u baahan tahay si loo horumariyo.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah shaqooyinka soo saarta:
dareewal - dajisaa, qaadataa daryeelka ee mashiinada wax soo saarka. Wuxuu diyaariyaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee la mashiinada jabay.
Wakiilka adeega Macaamiisha - wadahadalo shirkado ku iibsato sheyga. Inuu hubiyo waxay ku faraxsan yahay sheyga yihiin iyo qabanqaabisaa bixinta.
farsamo yaqaan adeegga Field - aado goobta iyo rajeenayo in waxyaabaha macaamiisha ah ee in wax dhibaato ah.
Warehouse associate - bakhaar waa meesha dhammaan qaybaha ku kaydsan yihiin. shurako Warehouse u hubiso in ay jiraan qaybo ka mid ku filan. Waxay ka dalban qaybaha iyo iyaga kobo.
hawlgalka Processing / kiniisadda - isticmaalaa mishiinnada inay isugu wada qaybo ka mid. Nadiifiyaa mashiinada iyo wuxuu diyaariyaa dhibaatooyin yar yar si farsamaysan. Tani waa shaqo ugu caansan dadka ma uusan dhammayn college ama dugsiga sare.
Kormeeraha gacanta Tayada - waa inuu xaqiijiyo in waxyaabaha shaqeeyaan, wanaagsan eegto, oo waa la wada dhigay midig.
dhexaadiyaha: Maareynta qalabka iyo dadka si loo hubiyo in wax walba waa sida soo dhacaya dhakhsaha badan ee suurtogalka. Ayaa xisaabin doona siyaabaha loo sameeyo shaqo dhici dhakhso.
Brazer iyo alxanka - barafku, laabaya, iyo hagaajinta qaybo bir ah qalab. Waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto Alxanka American Society oo waxay qaadan doonaan imtixaanka si aad u hesho shahaado a.
Tababaraha Hawlgallada - maaraynta geedi socodka badan oo dadka si ay u hubiyaan in wax soo saarka si sax ah isugu. loo shaqeeyaha intooda badan waxa ay raadinayaan shaqaalaha haysta shahaado ganacsi.
farsamo yaqaan Safety - jirrabaya mashiinada ka hor iyo inta lagu jiro isticmaalka si aad u hubiso inay ammaan yihiin. Go'aansiga siyaabaha loo tayeyn mashiinada si shaqaalaha ma ku dhaawacanto. Loo-shaqeeyayaasha raadiyo caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha, biology, iyo darajo chemistry.
Ma shaqo saarta xaq ii?
shaqooyinka wax soo saarka Qaar ka mid noqon kartaa mid adag oo ku saabsan jirkaaga. inta badan maalintii aad laga yaabaa in lagu taagan. Waxaad sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay ka shaqeeyaan inta lagu jiro habeenkii ama subaxdii hore. Waxaad u baahan doontaa aragtida wanaagsan iyo wadashaqeyn wanaagsan. Shaqooyin badan saarka jeednaa samaynaya hawl isku mid ah qaab la mid ah maalintii oo dhan. Waxaad doonaa malaha la shaqeeya meel buuq badan.
Shaqooyin badan saarka lug wada shaqaynta iyo fiiro gaar ah u faahfaahsan. Haddii aad si fiican u shaqayn karin in koox oo sii diiradda on faahfaahinta, saarka waxa laga yaabaa in shaqo wanaagsan kuu. Waxaa sidoo kale warshadaha wanaagsan oo loogu talagalay dadka doonaya in ay bartaan xirfado cusub iyo technology.
Daawo this video ku saabsan ka shaqaynta sidii ururiyaha ah
shirkadaha intooda badan door bidaan in ay shaqaaleeyaan dadka qaba waayo aragnimo hore ee warshadaha. Laakiin qaar badan yihiin gaaban shaqaalaha lagu kalsoon yahay, oo iyana waxay isu aad tababari doonaan.
Shaqo-bixiyeyaasha qaarkood laga yaabaa in aad u leedahay in shahaada ah ee (shahaado laba sano) qaar ka mid ah shaqooyinka xirfadda, sida in dareewal ah. shaqo-bixiyeyaal kale laga yaabaa in aad in la sameeyo barasho. barasho waa muddo tababar ah oo aad ka baran shaqada iyo ma bixiyo badan ilaa aad si buuxda u tababaran.
xirfadaha kombiyuutarka Good ay muhiim tahay in wax soo saarka sababtoo ah mashiinada badan waxaa maamula kombiyuutarada. Khan Academy ayaa bixiya dhammaan noocyada kala duwan ee fasalada oo lacag la'aan ah, oo ay ku jiraan fasalo badan barnaamijyada computer.
kulliyado badan oo qiimo-jaban fasallada tababarka computer iyo degrees oo shurako ah ee maadooyinka soo saarka la xiriira. Raadi Kulliyadda bulshada kuu dhow. Shaqooyinka qaar ka mid ah, waxaad u baahan doontaa shahaado jaamicadeed oo saynis ah, injineernimada ama ganacsi. Waxaad ka akhrisan kartaa degrees injineerinka saarka.
Waxaa jira siyaabo kala duwan si ay u bilaabaan shaqo raadintaada
Waxaad bilaabi kartaa rugta shaqada. xarumaha shaqada dowladda waa lacag la'aan. Waxay bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawiyaan resume iyo codsiyada shaqada. Waxay kugu xidhi karaan tababarka iyo waxbarashada shaqada. Raadi shaqada xarunta kuugu dhow.
Kuwani waa hogaanka 10 Shirkadaha in lagu shaqaaleyn doonaa shaqaalaha wax soo saarka ugu badan ee sanadaha soo socda. Waxaad ka raadsan kartaa shaqooyin internetka:
Waxaad kaloo isticmaali kartaa websites shaqo. Manufacturingjobs.com waa website a shaqo kaliya shaqooyinka wax soo saarka.